Kutheni Abantu Bokuba Abekholelwa KuThixo?
Ngaba Kukhona Nento Ekhethekileyo Ngomntu Ongakholelwa KuThixo?
Kukho izizathu ezininzi zokungakholelwa kuThixo njengoko kukho abantu abangakholelwa kuThixo. Into endiyithethayo ngolu hlobo kukuba indlela eya ku-atheism ihlala ibuqu kunye nomntu ngamnye, esekelwe kwiimeko ezithile zobomi bomntu, amava kunye nezimo zengqondo.
Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuchaza ukufana okuqhelekileyo okuqhelekileyo phakathi kwabantu abakholelwa kuThixo, ingakumbi abangakholelwayo kuThixo.
Kodwa ke kubalulekile ukukhumbula ukuba akukho nto kule nkcazelo ngokuqhelekileyo iyaqhelekileyo kubo bonke abangakholelwa kuThixo , kwaye nangona xa abantu abangakholelwa kuThixo bangabelana ngeziganeko, akunakucingelwa ukuba babelane ngezinga elifanayo.
Isizathu esithile sinokudlala indima enkulu kunomntu ongakholelwa kuThixo, inxaxheba encinci kwelinye, kwaye akukho nxaxheba inxalenye yesithathu. Unokuqiqa ngokucacileyo ukuba ezi ziqhelekileyo zinokuba yiyinyani, kodwa ukuba zifumane ukuba ziyinyani kwaye zinyani ukuba ziyinyaniso, ziyimfuneko ukuzibuza.
Esinye isizathu esivakalayo sokungahloneli uThixo sinxibelelana neentlobo ezahlukahlukeneyo zonqulo. Akuqhelekanga ukuba umntu ongakholelwa kuThixo ukuba akhuliswe kwindlu yonqulo kwaye akhule ephila ngokucinga ukuba inkcubeko yabo yenkolo imele Ukholo Olwenene KuThixo Oyinyaniso. Nangona kunjalo, emva kokufunda okungakumbi ngamanye amasiko enkolo, lo mntu ofanayo unokufumana isimo sengqondo esinzulu kunqulo lwakhe kunye nenkolo ngokuqhelekileyo, ekugqibeleni ukuza kukhanyela nje kuphela kodwa ukukholelwa ekubeni kukho nantoni na.
Esinye isizathu esenza ukuba uThixo akwazi ukuvela kwiimeko ezimbi ezinqulo. Umntu unokukhula kunye okanye aguqulwe kwinkolo yonqulo ekugqibeleni ekufumaneni ukuba ixinzezelekileyo, inkohliso, inkohlakalo, okanye ingafanelekanga ukulandela. Isiphumo salokhu kwabaninzi kukugxeka loo nqulo, kodwa kwezinye iimeko, umntu unokugxeka zonke iicawa kwaye, njengokuba kuchazwe ngcaciso engaphambili, kubaluleke nakakhulu ukukholelwa ekubeni kukho oothixo.
Ukukholelwa kuThixo kunye neSayensi
Abaninzi abangakholelwa kuThixo bayayifumana indlela yokungakholelwa kwisayensi . Kwiinkulungwane zeenzululwazi uye weza ukunika inkcazo yemeko yegama lethu elalibe yindawo ekhethekileyo yenkolo. Ngenxa yokuchazwa kwezenzululwazi kuye kwavelisa ngakumbi kunokwenkolo okanye ukuchazwa kwezenzo, ubuchule benkolo bufuna ukunyaniseka buye buthathaka. Ngenxa yoko, abanye abantu baye bakugatya ngokupheleleyo inkolo kuphela kodwa bakholelwa nokuba kukho ukhoxo. Kubo, oothixo abanamsebenzi njengengcaciso nayiphi na into yendalo yonke kwaye anikezeli nto into efanelekileyo yokupanda.
Kukho iingcinga zefilosofi ezithathwa ngabaninzi abaphumelele ekuchaseni ezininzi iimfundiso zonthixo. Ngokomzekelo, abaninzi abangakholelwa kuThixo bayacinga ukuba ukuPhikisana kobubi kubangela ukuba inkolelo inkolelo kunye noThixo onamandla onke ayinangqiqo kwaye ayinangqiqo. Nangona oothixo abangenazo iimfanelo ezingavunyelwanga, kukho ukungabikho kwezizathu ezilungileyo zokukholelwa koothixo abanjalo. Ngaphandle kwesizathu esihle, inkolelo ayinakwenzeka okanye ayifanelekanga ukuba nayo.
Le ngongoma yokugqibela iindlela ezininzi ezibalulekileyo. Ukungakholelwa kukusikhundla esingagqibekanga - akukho mntu ozalelwa enokholo.
Iinkolelo zifumaneka ngekcubeko kunye nemfundo. Akusikho ekugqibeleni ungakholelwa kuThixo ukuba unokukholelwa kuThixo; Kunoko, kuya kwi-theist ukuba uchaze ukuba kutheni inkolelo inkulunkulu inengqiqo. Ngaphandle kokungabikho nkcazo, i -ism kufuneka ibhekwe njengento engafanelekanga kuyo, kodwa ingenangqiqo.
Ngaloo ndlela, umbuzo ongcono kunokuba "kutheni abantu bengakholelwa kuThixo" mhlawumbi mhlawumbi kuba "kutheni abantu beza?"
Ukukholelwa Kukho Nobuthakathaka kwiGrisi Yamandulo
I-Butternut, Umthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
Umsebenzi weLebhu: Indlela yokubonisa ukuba uMoya unobungqina
UBob Fosse - iDancer kunye neChoreographer
IziCwangciso zoLwazi lweeNkcazo zoBucala
ILizwi loSuku - kazoku
Iimpawu Zangaphambili - Iimpawu Zethu Ezidlulileyo